सूचना/प्रविधि Archives - Page2of2- Suchana Daily
मोबाइल कहिल्यै Hang नहुने यो टिप्स जान्नुहोस् र शेयर गर्नुहोस् !
तपाइले कहिल्यै याद गर्नुभएको छ? मोबाइल फोन नयाँ-नयाँमा एकदम छिटो र राम्रो संग चल्छ । तर किनेको केहि महिनामै फोन ढिलो चल्ने, ढिलो स्टार्ट हुने, फोन नै ह्यांग हुने र कहिले काहिँ फोन आफै रीस्टार्ट समे हुने गर्दछ, यसले गर्दा मोबाइल प्रयोग कर्ताहरुलाई रिस पनि उठ्छ, तर के गर्नु यति महँगो मोबाइल कसरि ठेचारेरा फाल्नु। अनि.....
धेरै महत्वपूर्ण छ,कुनै पनि दिन काम लाग्न सक्छ, सेयर गरेर सुरक्षित राख्नुस् ।
कम्प्युटर चलाउने मान्छेले किबोर्डका सर्टकटहरु जानेको खण्डमा उसको काम छिटो छरितो हुने गर्दछ । यहाँ हामीले विन्डोज अपरेटिङ्ग सिस्टममा चल्ने ५०० भन्दा बढी सटकर्ट कि हरु राखेका छौं । यसलाई फेसबुकमा शेयर गरेर आजै सुरक्षित गरेर राख्नुहोला । कुनै न कुनै दिन पक्कै पनि तपाइहरुलाई काम लाग्न सक्छ है । अहिले पूरै.....
यी सात गल्तीले मोबाइलको मेमोरी हुन्छ फुल, खाली गर्ने तरिका जानी राखौँ !
मोबाइल फोन ह्याङ हुने तथा स्लो चल्ने कयौं कारणले हुन सक्छ । तर, यसको एक प्रमुख कारण स्टोरेज फुल हुनु हो । हामी आफ्नै केही गल्तीका कारणफोनको स्टोरेज फुल हुन्छ । यी गल्ती के हुन् र कसरी गल्तीबाट बँच्ने भन्ने ज्ञान हुँदा समस्याबाट मुक्ति मिल्छ : १. इंस्टाग्राम राखेको फोटो मोबाइल मेमोरीमा स्टोरेज हुन्छ । यस्ता.....
आजदेखि नयाँ आर्थिक बर्ष २०७६/७७ सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक बर्षसंगै अब तलब लिन सरकारले प्यान कार्ड (Permanent Account Number- PAN) अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था बमोजिम अब कुनै प्राईभेट कम्पनी, संस्था, फर्म तथा निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना कुनैपनि व्यक्तिलाई तलब दिन पाउने छैन । नयाँ आर्थिक बर्षसंगै.....
फेसबुकको नयाँ फिचर : अब पाउने व्यक्तिले नदेख्ने गरी मेसेज डिलिट हुने ऐजेन्सी । फेसबुकले मेसेज डिलीट गर्न सकिने नयाँ फिचर बनाएको छ । अब तपाइले पठाएको मेसेज पाउने मान्छेले नदेख्ने गरी हटाउन सकिने छ । यो भन्दा पहिला पठाउने व्यत्तिले मेसेज डिलिट गरे पनि पाउने व्यत्तिले देख्न मिल्थ्यो तर अब पाउने प्रापकले.....
जीवनमा सफल र सुखी रहन पालना गर्नुस भगवान श्रीकृष्णको यी १० प्रेरक बचनहरू
जीवनमा सफल र सुखी रहन पालना गर्नुस भगवान श्रीकृष्णको यी १० प्रेरक बचनहरू वास्तवमै भगवान श्रीकृष्ण थिए वा त्यो कुनै चरित्रको रचना गरिएको थियो ? यसमा अनेकन तर्क छन् । यद्यपी सबैले स्विकारेको के भने, श्रीकृष्ण एक यस्तो पात्र हुन् जो अनुसरणिय छन् । नीतिज्ञ, शक्तिमान, वौद्धिक, तार्किक क्षमताका भगवान श्रीकृष्णलाई.....
एजेन्सी । अमला प्रकृतिले निःशुल्क उपहार दिएको बहुगुणी फल हो । अमलामा प्रसस्त मात्रामा भिटामिन सी पाईन्छ । अमला खानाले आँखाको रोशनी बढ्नुका साथै बच्चाको झाडापखाला समेत निको पार्छ । आयुर्वेदिक दृष्टिकोणले पनि अमलाको अति नै महत्व छ । अमलामा रहेको तत्वले दिमाग तेज बनाउँछ । त्यसैगरी छालाको समस्याबाट दूर राख्छ.....